Bonsai Carmona: incazelo, ukunakekelwa ekhaya
Bonsai Carmona - isitshalo Asian (igama lesibili - "Itiye esihlahleni"), i shrub siluhlaza namahlamvu ezincane ecwebezelayo ukuthi embozwe izinwele ukukhanya. Bonsai okukhethwa kukho esihle kakhulu ehhovisi noma ekhaya, lapho ungase ukwazi ukudala isihlahla isitayela enhle Japanese.
Bonsai - ifilosofi
art Japanese bonsai eminyakeni yamuva sekwande kakhulu emhlabeni. kwemifanekiso Miniature zezihlahla - indlela ukudlala ekhoneni ezincane zemvelo efulethini esizoheha ikhaya abathandi isitshalo zokuhlobisa. Okunjalo "dwarfs Japanese" engeza ukunambitheka Asian futhi ukuhlobisa ingaphakathi.
Growing bonsai esiza ukudala ibhalansi ngokomzwelo nokuzindla melancholy. Lesi simila lwenteke ifilosofi umbono wobuhle ezintweni ezincane, kubonise ubuhle bemvelo endaweni encane. nefilosofi Eastern uthi bonsai isihlahla lepilo, ngokusiza ekuligcineni yokukholwa essence eziphilayo isitshalo njengoba ngesisekelo yonke.
Kodwa-ke, kudingeka isineke nesikhathi sikhule izihlahla ezinjalo. Ngakho-ke, labo abafuna ukuzama bonsai yabo yokuqala, singakwazi ukuncoma kuqale elula kunazo nesingakhangi inakekelwa izitshalo - Bonsai Carmona.
Carmona kubhekwa umuthi omncane, ngawo ziqala ukwazana luthela abathandi bakhe yalesi ubuciko. Indlela yokutshala bonsai njengoba amanzi awo futhi zalisa, kanjani ukwakha umqhele - izisekelo wokunakekela bonsai bafundza Carmona.
amagxolo okunzima kobugebengu, nge sikhathi lube njengofakazi amagxolo omuthi ubudala. Carmona blooms obucayi izimbali ezimhlophe amacembe eziyisihlanu. Izithelo ibukeke amajikijolo amancane abomvu noma orange (non-ezidliwayo).
Bonsai Carmona blooms ngokuvamile izikhathi 2-3 ngonyaka, futhi ngokunakekela okuhle futhi izibani ezengeziwe - unyaka wonke. Futhi phezu kwesihlahla kungaba kokubili izimbali nezithelo. Lapho ayakhala kufanele aqiniseke ukuthi samanzi singenalo angena ukuze izimbali kusuka lapho bengathola omnyama kwalasha. izimbali ebolile kufanele ngokushesha ulahle, ukuze singathwesi ukunqoba ukhunta uqalile.
Phakathi balimi amateur kukhona owande kakhulu Carmona 2: encane enezicabha futhi macrophylla.
Carmona enezicabha - Bonsai Carmona microphylla. I oluyilo igama Botanical - Ehret samshitolistnaya (Ehretia buxifolia), kodwa "Carmona" lisetshenziswa kaningi. Igama isitshalo lithole sibonga sezitshalo German GD Ehret, futhi ukufana kwamazwi amaqabunga ku boxwood kushiya ungeze naso lesiLatin elithi buxifolia. Enezicabha Carmona singafinyelela ubude obungamamitha ka-40 cm. Ngo obuphelele leves zikhule 1-2 cm futhi ahlelwe ngesikhathi petioles short.
Carmona macrophylla has a stem mkhulu futhi eshiya ezinkudlwana. Ukunakekelwa ezifanelekayo ukufuya lezi izinhlobo bonsai kucishe.
Carmona (bonsai): ukunakekelwa ekhaya
Iningi izitshalo belethwa eRussia kusukela China, kanye inhlabathi equkethe okuningi ngobumba. Nge ukuthambisa njalo kakhulu ngakho ohlangene umhlabathi, ukuze izimpande ziqala ukuzwa ukuntuleka komoya-mpilo. Ngakho-ke, uma uthenga izihlahla ezinjalo kungcono ukuba zidluliselwa ku zazingekho emhlabathini ofanele.
Umhlabatsi bonsai Carmona ngokuvamile kwenziwa ngenhloso, liphethe elimbudumbudu ubumba, isihlabathi futhi Peat elixutshwe ngezabelo alinganayo. izitshalo ezincane kumele utshalwe njalo eminyakeni 2, ngokuvamile entwasahlobo (April). bonsai Okudala angakwenza ngaphandle esikhundleni umhlabathi eside.
Lapho zitshala Kumele kuqashelwe ukuthi Carmona akakuthandanga ukusika izimpande, ngakho esikhundleni substrate kudingeka kwenziwe ngezigaba eziningana. Izimpande mfushane kancane kancane phakathi esikhundleni esilandelayo zenhlabathi, ukuze singathwesi faka ukucindezeleka isitshalo.
Kwakunezigqiki ezithambile uyajabula efudumele, ngoba ehlobo azizwa kangcono endaweni evulekile, endaweni kancane ukubopha, t. Ukuze. Le elangeni, ke akathandi. Overwinter njengoba Carmona egumbini lendlu noma ifulethi, like umswakama high.
Ukunisela kuyadingeka kaningi kakhulu, t. Ukuze. Isitshalo akakubekezeleli iphele ukuphuma futhi kuyenzeka ife. Ukunisela kungcono kuvikelwa amanzi emvula. Ukuze kwandiswe bonsai nomswakama imbiza ufake esitsheni ngamanzi ukuze uthele gidrosharikami noma ubumba zandiswa okuyinto asivumeli contact we amanzi nomhlaba.
Carmona futhi uthanda ufafaze, kodwa kufanele kwenziwe ngokuqapha. Uma uhamba ekamelweni okusalungiswa noma ezibandayo, lesi sitshalo ingase igule.
Ngoba umuthi Umanyolo zisebenzisa ekhethekile izindlela organic for bonsai. Esikhathini kusuka kwentwasahlobo kuze ekwindla 1 zalisa kanye ngesonto ebusika - njalo ngenyanga.
Carmona othanda kakhulu ukukhanya, ngakho-ehlobo kubalulekile ukubeka ethunzini esinqunyiwe ngaphandle. Isici ebusika Fluorescent ukukhanya egumbini.
Kumiswa isihlahla umqhele
abalandeli abaningi abafuna ukuzalela bonsai isihlahla ekhaya, banesithakazelo indlela yokutshala bonsai ngiwunike ukuma ofiselekayo isitayela Japanese, ngenxa lapho zikhona ezihlukahlukene :. okuqondile, wendlale, lefanele, ungalibalekeli, multicore, njll Kukhona izinhlobonhlobo eziningana ngamunye kubo izici zifanekisela sengqondo zefilosofi ekuphileni.
Carmona ingasetshenziswa kwanoma yisiphi isitayela bonsai. Ngosizo bentambo we 1- kanye engu-2 ubudala amagatsha kalula ukuthatha ukuma kusengaphambili. Ukuze amagatsha amadala kanye nokusetshenziswa esintamo tensioners ekhethekile ukuze kugwemeke umonakalo cortex.
Ngokuvamile Wabasaqalayo nayizimfundamakhwela uthenga umuthi kakade okuhloswe bonsai isitayela, khona-ke kungenziwa ngcono. Ukuze lasungulwa kuthatha okungenani ngonyaka.
Uma ukhipha amagatsha ubudala ukusoka indawo kusetshenzwe engadini phezulu. Kakade baba amahlumela eqinile ukuthi usukhulile ukuba 10-20 cm, kufanele saba amahlamvu 1-3. It kuncike komqondo nezinga lokukhula kwengane kanye nesimo sempilo kwezihlahla.
Bonsai Carmona okusakazwa ngokusebenzisa imbewu noma cuttings. Phakathi izihlahla yonyaka isihlahla cuttings etholakala abafika kwabangu-10 cm. Bangaphinde kwenziwe ezweni greenhouse ezincane, okuyinto batheleka inhlanganisela Peat nesihlabathi. Kubalulekile ukulondoloza umswakama high kanye lokushisa mayelana 18 ºC, ukuthambisa ngokulinganisela. Ngokuvamile evuselela ekhethekile esetshenziselwa izimpande yokukhula okusheshayo kwandisa amathuba okuthola i-cuttings nge simiso esibanzi impande. Lapho cuttings ungumzali isitshalo zobuntu ezifanayo.
Imbewu esiphelweni - inqubo eside futhi kukhathaza lapho izinga ngaso sonke isikhathi izihlahla, kusukela lapho zihlobene ngocansi.
Izinambuzane bonsai Carmona
Njenganoma iyiphi isitshalo Carmona bonsai, abanakekela ekhaya kudinga ukuthambisa efanele, efaka umquba, njll, Ukuze kwesihlahla efanayo kakhulu ekuthonyweni izifo ezihlukahlukene futhi izinambuzane. Kungaba izimpethu mealy, izinambuzane esikalini, ehlobo, ingxenye isitshalo uhlushwa kuhlasela aphid, yizimbuzane futhi chlorosis.
aphid Engamakhambi, okuyinto feeds juice kusuka amaqabunga neziqu, ngokuvamile kwenzeka ohlangothini engezansi amaqabunga. Indlela elula ukulwa: cwilisa emanzini nge ziyoncibilika insipho ucezu uhala, okuyinto wasusa zonke aphid amaqabunga. Ngemva kwalokho, le zinambuzane kwakunezigqiki ezithambile isibambo ulwe aphid.
Jose esikalini - ngomonakalo lokhu izitshalo inkathazo ungakwazi ukuqagela, lapho ziyeka ekuthuthukiseni amahlumela, amaqabunga omile, nsundu bese ewa. Ngokuvamile, lezi zinambuzane nsundu onsundu ukudala ikoloni ngasesinqeni se isiqu. Ukuze ulwe izinambuzane esikalini kumelwe kususwe neziqu esiqwini, Sula utshwala fafaza zinambuzane.
Spider olwenziwa lincane kakhulu, ngakho-ke kunzima ukuthola. Imikhaza isiyingi e ukuma nombala ophuzi, phila amahlamvu kuthabathela ecaleni phansi Criss-Ukunqamula sewebhu. Amahlamvu ibuna, fade futhi sidilike. I olwenziwa kunosongo kuyingozi kakhulu. Ukuvimbela ufika kufanele balondoloze umswakama high, fafaza amahlamvu, webs ezimanzi, t. K. A umkhaza ayithandi amanzi. Lezi zinambuzane zibanjwa usebenzisa udlawana kanti amacembe iphathwa i utshwala. Ungasebenzisa miticides (zisebenzisa imiyalelo ohambisana).
Ukubonakaliswa ejwayelekile iningi isifo noma inkathazo ukuhlaselwa, wazibonela bonsai Carmona - amahlamvu ekwindla nsundu noma ogodweni, ulahlekelwe umbala wabo. Zonke lezi zimpawu kubonise ukuthi kudingeka afune imbangela futhi isihlahla sidinga ukutakulwa ngokuphuthuma.
Izifo ezithinta Bonsai Carmona:
Lozhnomuchnistaya futhi powdery isikhutha - inkinga ezivamile phakathi lezi zitshalo, lapho izindawo ivele amahlamvu gray phansi, ekugcineni ishiye mnyama ukuwohloka. Isihlahla elaphe ukusika amahlamvu ezigulayo (iziphi ke washisa), emva kwalokho kufanele ziphathwe fungicide by. Lesi sitshalo uqobo kuze ngokuhlukaniswa, ukuze ngingasebenzisi ukuthelela abanye.
Chlorosis - ubulwelwe lapho lesi sitshalo ilahlekelwa nombala elangeni yokuntuleka ukulahlekelwa izakhi. Ukuze ukwelashwa lomuthi ibekwe endaweni libalele futhi umquba ukudla.
White impande bola - ukhunta yisinanakazana ohlasela nezimpande zezihlahla. Inkulumo Echaza Isimo Sezwe isitshalo kule isifo zimbi kakhulu, amacembe awohloka kanye izimpande ziqala ukuthambisa ngenze mnyama. Ukugcina lesi sitshalo, kuba nesidingo esiphuthumayo ukufakelwa, esikhundleni imbiza kanye nomhlabathi. Qiniseka ukuthi ufuna ukususa zonke izingxenye abathintekayo we izimpande, kanye asele ziphathwe ejenti zamakhemikhali.
Ngokunakekela bonsai efanele Carmona sikhule isihlahla esihle omangalisayo, okuzoba siluhlaza mini-wobuciko, emi ethreyini.
Apple isihlahla Nedzvetski: incazelo, betshala nokunakekela
Amagilebhisi amabhola Riddle: incazelo kanye nokubuyekeza
Clutch Black - Classic yangempela
Zitshala Tui: ezicashile inqubo
Isimo sezulu kanye sezulu eBelarus. Ukushintsha kwesimo sezulu kanye nezimbangela zayo e Belarus
Lasekuqaleni umqondo ekuphileni